Fanambaram-pananana :: Kivy amin'ny afitsok'ireo solombavambahoaka ny Bianco • AoRaha
Solombavambahoaka miisa enimpolo mahery, hatramin’ izao, no tsy mbola nahavita ny fanambaram-pananany any anivon’ny Fitsarana avo momba ny Lalàm-panorenana (HCC). Kivy amin’ny fanararaotana sy ny fanitsaki­tsahan-dalàna ataon’ireto olom-boafidy ireto ny Birao mahaleo tena misahana ny kolikoly (Bianco), araka ny nolazain’ny loharanom-
baovao iray ao amin’ny Bianco, tamin’ny antso an-tariby, omaly.
« Efa maro ny trangana tsy fanarahan-dalàna amin’ny fanaovana fanambaram-pananana toy izao, saingy tsy mbola nisy nosaziana ireo tompon’antoka », hoy izy.
Nilaza handefa fampatsiahi­vana any amin’ny filohan’ny Antemierampirenena ny Bianco.
« Hangataka alalana any amin’ny HCC izahay mba hahafahana mandefa taratasy fampatsiahivana ho an’ireo solombavambahoaka tsy mbola nahavita ny fanambaram-pananany. Aorian’io kosa no tsy maintsy handrai­sana ny fepetra ireo olom-boafidy ireo, raha mbola minia tsy milaza ny tomban’ ny fananany etsy amin’ny HCC », hoy hatrany ny loharanom-baovao.
Notsiahiviny fa : « vitsy dia vitsy ireo solombavambahoaka nanaja ny fe-potoana telo volana aorian’ny nandrai­sana asa, izay voafaritry ny lalàna mifehy ny ady amin’ny kolikoly fa tokony hanaovana ny fanambaram-pananana eny anivon’ny HCC ». « Tamin’ny 2 oktobra 2019 io daty farany voalazan’ny lalàna io. Efa tara telo volana ireo mpikambana ao amin’ny Antenimierampirenena », hoy ity loharanom-baovao ity.
Ady amin’ny valanaretina Hihetsika hanampy ny fanjakana ny fiarahamonim-pirenena
Fisorohana fiparitahana valan’aretina :: Vahiny avy any Shina sivifolo mahery arahi-maso akaiky
« Afrobasket 2021 » :: Tokony hitombo ny herijikan’ i Madagasikara